Fifidianana Filankevi-pitantanana Ao Amin’ny GV 2017 : Laura Vidal · Global Voices teny Malagasy
Fifidianana Filankevi-pitantanana Ao Amin'ny GV 2017 : Laura Vidal
Voadika ny 12 Marsa 2017 17:39 GMT
(Fanamarihana : Ity andian-dahatsoratra ity dia momba ireo mpirotsaka an-tsitrapo ao amin'ny tranonkala isan-karazany ato amin'ny Global Voices, voatendry hofidiana ho solontena eo anivon'ny Filankevi-pitantanan'ny fikambanana mandritra ny 2 taona)
Tiako aloha ny milaza fa feno fanetre-tena tanteraka aho voatendry ho kandidà solontenan'ny ekipa-tonia. Nanomboka efa ela (tamin'ny taona 2007) ny fiarahako tamin'ny GV, ary mpikambana amin'ny fomba ofisialy kokoa tamin'ny 2015 rehefa lasa (Community Manager) an'i Amerika Latina ato amin'ny GV aho. Mino aho fa izaho irery hatramin'izao no anatin'ny fikambanana, satria tsy misy Community Manager any amin'ny faritra hafa (saingy mino tanteraka aho fa nisy/misy ireo olona afaka manao izany andraikitra izany na dia tsy mitondra anarana izany asa izany aza).
Ankehitriny, mahatsiaro sambatra ihany koa aho anisan'ireo tonian'i Amerika Latina.
Ireo andraikitra roa ireo dia nahatonga antso sy fifanakalozan-kevitra marobe izay nahatonga ny asako isan'andro ato amin'ny GV ho sarotra sy matsiro. Mitoetra ato anatiko ny maro amin'ireny resaka ireny ary nanampy ahy hahatakatra ny hery tsy mampino amin'ny fomba fiasan'ity fikambanana ity, ary mahatonga ahy hientanentana rehefa hiasa ho toy ny tetezana ao anatin'ny sehatry ny tonian-dahatsoratra sy ekipam-pitarihana ato amin'ny GV.
Tetezana ao anatin'ny tetezana
Tiako ihany koa ny misaotra ireo olona mahafinaritra nanoratra tamiko nandritra ireny andro ireny sy nanomezan'izy ireo fanohanana rehefa nahazo fanendrena.,,
Ankehitriny, rehefa nahita ny lisitr'ireo kandidà, aho te-hiteny fa tsy halahelo loatra raha tsy ho voafidy ! Ha! Saingy mino aho fa ny tiako lazaina eto dia ho faly tanteraka aho hanampy izay olona ho voafidy.
Raha mihevitra ianao, amin'ny farany, fa afaka manao tsara ny asa aho, dia hanao izay vitako mba tsy handiso fanantenana anao. Tsy dia mahay manao fampielezan-kevitra loatra na manao fampanantenana tahaka ny mpanao politika aho! saingy afaka milaza tsy amin-tahotra aho fa voalohany indrindra, hihaino tsara anareo rehetra aho, amin'ny fomba feno sy mahatsapa ny fihetseham-pon'ny hafa, na inona na inona lohahevitra
Nihevitra aho fa hevitra tsara ny mamehy izany amin'ny fanasana anareo rehetra haneho hevitra eto ambany mikasika izay andrasanareo avy amin'ny solontenan'ny ekipa-tonia. Inona no andrasanao? Ahoana ny hevitrao mikasika izay tokony ataon'ny solontena mendrika?
25 Jona 2021Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana